कफी खेतीको विस्तार र निर्यातको बढ्दो सम्भावना | Bishow Nath Kharel
कफी खेतीको विस्तार र निर्यातको बढ्दो सम्भावना
Posted on December 29, 2017 by bishownath
विश्वनाथ खरेल, फागुन १७,
संसारमा पेट्रोलियम पदार्थपछिको दोस्रो ठूलो परिमाणमा बिक्रीवितरण हुने वस्तु कफी हो र यसको खेती एक सयभन्दा बढी देशमा गरिएको छ । ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश हो भने अमेरिका सबैभन्दा बढी खपत गर्ने देश हो । संसारको कुल कफी निर्यात देशहरुको प्रतिवेदनलाई अवलोकन गर्दा विश्वमा सन् २००८ मा १३ करोड ४१ लाख ६३ हजार ब्याग कफी उत्पादन भई विभिन्न मुलुकहरुमा निर्यात भएको थियो भन्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी विश्व बजारमा प्रवेशसँगै नेपाल पनि कफीको उपभोग र खेती हुन पुगेको हो । देशमा कफी उपयुक्त देखिएकाले हाल निदरल्याण्डबाहेक अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र जापानले समेत कफीको माग गर्न थालेका छन् । विश्वमा कफीका जाति र प्रजाति गरी ७० भन्दा बढी रहे पनि अरबिका, सेवस्टा, लाइबेरीका र उक्सेल्सा जातका कफी आर्थिक दृष्टिले अति उपयुक्त मानिएकामध्ये नेपालमा हाल अरबिका जातको कफी प्रचलित छ । समुद्र सतहबाट पाँच सयदेखि १३ सय मिटरसम्मको उचाइमा रहेको भित्री मधेस र पहाडी क्षेत्रमा अरबिका जातको कफी खेती गर्न उपयुक्त देखिएकाले नेपालमा यसै जातलाई नै अघि बढाउन थालिएको छ । गुल्मी, पाल्पा र कास्कीमा कफी बेर्ना प्रसस्त लगाउन थालिएको र बेर्ना रोपेपछि कफीको बोटले तीन वर्षपछि लगातार फल दिन थाल्ने र त्यही एउटै बोटले कम्तीमा ५० वर्षसम्म फल उत्पादन गर्नेछ ।
कफीको खेती सर्वप्रथम नेपालमा गुल्मी आँपचौर निवासी हिरा गिरीले बर्माको सिन्धु प्रान्तबाट वि.सं.१९९५ मा केही कफीको बोट ल्याई खेती गरिएको भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण रहेको पाइन्छ । त्यसपछि विस्तारै विस्तारै देशव्यापी रुपमा यसको खेती गरिन थालियो । २०३३ देखि २०४६ सालसम्म आइपुग्दा पनि एक्लो सरकारी प्रयासबाट केही पनि प्रगति हुन सकेन । यसमा बजार र प्रविधिको अभावले यसको विस्तारमा कृषकहरुको नेतृत्वले कफी उत्पादक समूह गठन गरी २०४८ सालमा समूहहरु सो संघमा परिणत गराई नेपाल कफी व्यवसायी संघको स्थापना भयो । यसर्थ वि.सं. २०२० को दशकतिर नेपाल सरकारले भारतबाट कफीको बीउ ल्याई वितरण गरेपछि कफी खेतीले विस्तारै गति लिन थालेको बुझिन्छ । आर्थिक वर्ष २०४०÷४१ मा रूपन्देहीको मनिग्राममा नेपाल कफी कम्पनीको स्थापना भयो । यसले कृषकहरूले उत्पादन गरेको सुक्खा कफी खरिद गरेर आन्तरिक बजारको लागि प्रशोधन गर्ने गथ्र्यो । यसरी २०४८ सालमा नेपाल कफी उत्पादक संघको स्थापनाले कफी उत्पादकहरूलाई संगठित हुन मद्दत ग¥यो । यसैगरी २०५० सालमा बजार व्यवस्था र मूल्यलाई व्यवस्थित गर्न संघकै अनुरोधमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भई २०५१ देखि वार्षिकरुपमा मूल्य निर्धारण सुरु भई हालसम्म कायमै रहेको छ । त्यस्तै २०६१ सालमा जिल्ला कफी व्यवसायी संघहरुलाई आ–आफ्नै जिल्लामा दर्ता गर्ने स्वायत्तता दिई छाता संगठनको रुपमा राष्ट्रिय संघलाई महासंघमा रुपान्तरण गरियो । हाल यस महासंघमा पाल्पा, गुल्मी, अर्धाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, तनहुँ, लमजुङ, काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, गोर्खा, बागलुङ र मकवानपुर गरी १४ जिल्लाहरुको आबद्धता रहेको छ । अन्य केही जिल्लाहरु आबद्धताको तयारीमा छन् ।
देशमा विविध किसिमको भौगोलिक बनावट तथा हावापानी भएको हुँदा संसारका जुनसुकै देशमा जुनसुकै जातका कफी लगाउन सकिने अवस्था छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको मध्यपहाडी जिल्लाको आठ सयदेखि १ हजार सात सय मिटरको उचाइसम्म अरेबिका जातको कफी खेती गर्न सकिन्छ । अरेबिका जातको कफी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने ७० देखि ८० प्रतिशत सापेक्षिक आद्र्रता, १६ सयदेखि २५ सय मिलिमिटरसम्म वर्षा र कम्तीमा १० देखि १२ घण्टा घाम लाग्ने र १५ देखि २५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम, अधिकांश उत्तरपूर्वी र दक्षिणपूर्वी मोहडा मध्यपहाडी क्षेत्रभित्र पाइन्छ । नेपालका सबै पहाडी जिल्लामा कृषिलगायत ग्रामीण सडक र यातायात सञ्जालको विकास हुने क्रम बढ्नुका साथै पछिल्लो समयमा सरकारका विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ, बिजुली सबै ठाउँमा पुगिसकेका कारण नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना देखिन्छ । हाम्रो देशमा पाइने सबै कफी एक हजारदेखि एक हजार छ सय मिटरसम्मको उचाइमा उत्पादित अरेबिका वर्णको टिपिका र बर्बन जातका हुन् । प्रायः सबै ठाउँमा हातैले टिपेका कफीहरू हाते वा लघु पल्पिङ मेसिनमा प्रशोधन गरिन्छ ।
मुलुकको कुरा गर्दा कफीको खेती मध्य पहाडका करिब ४० जिल्लामा २६ हजार पाँच सय कृषकहरुले गरेको अनुमान छ । यसको संगठित रुपमा १४÷१५ जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा खेती भएको पाइन्छ । पाल्पा, गुल्मी, अर्धाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, तनहुँ, लमजुङ, काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, गोर्खा, बागलुङ र मकवानपुर हुन् भने धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, ओखलढुंगा, रामेछाप, इलाम जिल्लाहरुमा पनि कफी खेतीको विस्तार भइरहेको पाइन्छ । कफीको रोपण क्षेत्र पनि आर्थिक वर्ष २०५३÷०५४ २ सय ६० हेक्टर थियो भने उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने ड्राइ चेरी ३७ दशमलव ३५ मे.टन. भएको थियो । यसै क्रमलाई अवलोकन गर्दा विभिन्न आर्थिक वर्षमा २०६१÷०६२ मा ११४ मेट्रिक टन पार्चमेन्ट, २०६२÷०६३ मा १५६ मेट्रिक टन पार्चमेन्ट, २०६३÷०६४ मा २७० मेट्रिक टन पार्चमेन्ट, २०६४÷०६५ मा २६५ मेट्रिक टन पार्चमेन्ट, २०६५÷०६६ मा २६७.६ मेट्रिक टन पार्चमेन्ट, २०६६÷०६७ मा एक हजार छ सय ३० हेक्टरमा लगाइएको कफीको उत्पादन ३४३ मेट्रिक टन ग्रिनविन, २०६७÷०६८ मा एक हजार सात सय ५२ हेक्टरमा लगाइएको कफीको उत्पादन पाँच सय दुई मेट्रिक टन ग्रिनविन र २०६८÷०६९ मा एक हजार सात सय ६० हेक्टरमा लगाइएको कफीको उत्पादन पाँच सय २३ मेट्रिक टन ग्रिनविन उत्पादन भएको तथ्यांक पाइन्छ ।
समष्टिरुपमा निर्यातकोे आँकडालाई अवलोकन गर्दा आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा पाँच करोड ४४ लाखबराबरको कफी आयत भई करिब तीन करोडबराबरको आयात घटेको तथ्यांकले देखाएको पाइन्छ । त्यसैगरी मुलुकमा अहिले करिब तीन हजार कृषक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कफी खेतीमा लागेका छन् । २०७२ को उत्पादन रेकर्डअनुसार कुल एक हजार सात सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब चार सय ५० मेट्रिक टन ग्रिनविन कफी उत्पादन भएको छ । विश्व बजारमा नेपालबाट उत्पादित अग्र्यानिक कफीको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कुल उत्पादनमध्ये ७० प्रतिशत कफी कोरिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी निर्यात हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको मागलाई हिसाब गर्ने हो भने वार्षिक १० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी छ । तर, उत्पादन कम भएका कारण उक्त मागको पाँच प्रतिशत पनि निर्यात हुन सकेको छैन । नेपाली कफी निर्यातबाट वार्षिक करिब साढे सात करोड वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने गरेको छ । तर, अन्य मुलुकबाट नौ करोडबराबरको विभिन्न ब्रान्डको धूलो कफी नेपाल आयात गरिन्छ । यसले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्र नभई नेपाली बजारमा पनि नेपाली कफीको माग बढिरहेको छ । यसबाट के कुराको अवगत हुन्छ भने हाम्रो देशले अरु देशहरुलाई ठूलो धनराशी भुक्तानी दिएको पुष्टि हुन्छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर राखेर हाम्रो देशले कफीको क्षेत्रफललाई विस्तार गरी प्रतिएकाइ उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने टड्कारो स्थिति रहेको देखाउँछ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपालमा कफी खेती गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, वातावरण सुरक्षा तथा दिगो आय–आर्जन गर्ने एक लोकप्रिय खेतीका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । हाल देशको मध्य तथा पश्चिम पहाडी जिल्लामा समुद्र सतहबाट आठ सय मिटरमाथि हिउँ, तुषारो नपर्ने ठाउँमा लगाइएको कफी गुणस्तरीय कफीका रूपमा उत्पादन भई विदेश निर्यातले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको माग दिनानुदिन बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा कफी उत्पादन क्षेत्रको विस्तार गर्नुका साथै उद्योगको विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । मुलुकको २४ जिल्लाहरु भन्दा बढीमा अधिकांश साना कृषकहरुले अभिरुचि देखाइ व्यावसायिक रुपमा कफी खेती भएको छ । विगतमा चेरी कफीको दाना उत्पादन हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि कफीको पार्चमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । मुलुकमा २०३५ देखि कृषकहरुले व्यावसायिक रुपमा कफी खेतीको सुरुवात गरेका थिए । यसमा पनि कफीको उत्पादन घट्न जानुको मुख्य कारणहरुमा यसको बोटमा गवारो रोगका कारण केही जिल्लाहरुमा उत्पादनमा घट्न गएकोले यस्तो भएको हो । देशमा उत्पादित कफीमध्ये करिब ६० प्रतिशत निर्यात हुन्छ र ४० प्रतिशत मात्र नेपालमा खपत हुने गरेको छ । मुलुकमा उत्पादित कफी विदेश निर्यात भएपछि नेपाली बजारका लागि भारतबाट वा इटालियन कफीको आयात भइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो रेकर्डअनुसार राष्ट्रमा वार्षिक चार सय ५० मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य मागलाई हेर्ने हो भने १० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढीको वार्षिक माग भइरहेको पाइन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उत्पादित कफीका लागि अहिले मात्र होइन, वर्षौं वर्षसम्म पनि बजारको अभाव देखिँदैन । त्यस्तै गरी त्यतिकै मात्रामा पहाडी गाउँ–गाउँमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी करिब २६ हजारभन्दा बढी कफी किसान लाभान्वित भएका छन् । यसरी यी कृषकहरु सात सय ५० भन्दा बढी समूहमा आबद्ध छन् । कफी उत्पादनको वर्तमान अवस्था तथा उत्पादकहरुको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रांगारिक कफीको बजार सम्भावना हेरेर नेपाल कफी व्यवसायी महासंघले नेपालका लागि अरेबिका प्रजातिको कफी समुद्री सातहदेखि आठ सयदेखि एक हजार छ सय मिटरको उचाइसम्म प्रंगारिक व्यवस्थापनका साथ गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकमा उत्पादित गुणस्तरीय कफीको सम्भावनादेखि विदेशी दातृ निकायहरुको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी कफी उद्यममा लगानी गर्न विभिन्न निकाय सक्रिय भएको देखिन्छ । मुलुकको मध्य पहाडी भागका ४० जिल्लामा कफी खेती हुने सम्भावना बढी रहेको पाइन्छ । यसबाट कृषकहरुको आयआर्जन बढ्नुको साथसाथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने दरिलो आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । अतः बोर्डले कफी उत्पादन बढाउनका लागि वर्षेनि नयाँ बिरुवा रोपण कार्यक्रम लागू गरिरहेको जनाएको छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने अहिले करिब तीन हजार कृषक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कफी खेतीमा लागेका छन् । २०७२ को उत्पादन रेकर्डअनुसार कुल एक हजार सात सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब चार सय ५० मेट्रिक टन ग्रिनविन कफी उत्पादन भएको छ । विश्व बजारमा नेपालबाट उत्पादित अग्र्यानिक कफीको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कुल उत्पादनमध्ये ७० प्रतिशत कफी कोरिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी निर्यात हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको मागलाई हिसाब गर्ने हो भने वार्षिक १० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी छ । तर, उत्पादन कम भएका कारण उक्त मागको पाँच प्रतिशत पनि निर्यात हुन सकेको छैन । नेपाली कफी निर्यातबाट वार्षिक करीब साढे ७ करोड वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने गरेको छ । तर, अन्य मुलुकबाट नौ करोडबराबरको विभिन्न ब्रान्डको धूलो कफी नेपाल आयात गरिन्छ । यसले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्र नभई नेपाली बजारमा पनि नेपाली कफीको माग बढिरहेको छ । यसकारणले गर्दा हालैका दिनमा विश्व बजारमा माग बढ्दै गएको हुँदा हाम्रो कफी खेतीको उत्पादन तेस्रो मुलुकतर्फ निकासिका कारण समेत कृषकहरु यसतर्फ आकर्षित भएको पाइएको छ । यसरी कफी खेतीबाट आफू व्यावसायिक हुने मात्र होइन, देशका बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारको अवसर मिल्छ । स्वदेशमै बसेर पनि विदेशी धन आर्जन गरी देशको अर्थत्रन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ ।
Source : http://www.sulsule.com/news_details/11151/html